M/weyne Shariif oo shir jaraa?id ku qabtay Muqdisho, kana warbixiyey kulankii uu la yeeshay Hillary Clinton. [Akhris …] – Radio Daljir
M/weyne Shariif oo shir jaraa?id ku qabtay Muqdisho, kana warbixiyey kulankii uu la yeeshay Hillary Clinton. [Akhris …]
Muqdisho, Aug 10 – M/weynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed ayaa maanta shir jaraa?id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho kaga warramay safarkii dhawaan uu ku tagay dalka Kenya.
M/weyne Shariif oo shirkiisa jaraa?id ku qabtay aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya , ayaa si faah-faahsan uga warbixiyey kulamo isaga iyo mas?uuliyiin ka socota beesha caalamka ku dhax-maray magaalada Nairobi, gaar ahaan kulankii u la yeeshay xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Hillary Clinton.
Md. Shariif waxaa uu sheegay kulankii dhax-maray isaga iyo Hillary Clinton in uu ahaa mid muujinaya sida dawladda Mareykanka ay uga go?an tahay taaageeridda dawladda Soomaaliya wuxuuna intaasi ku daray hadda xukuumadda Washington in ay laba jibaartay gacansiinta Soomaaliya.
Dhanka kale, M/weyne Shariif waxaa uu tilmaamay intii uu ku sugnaa Nairobi kulamo kale oo aad u muhiim ah in uu la yeeshay madax badan oo ka socotay beesha caalamka oo ay ku jiraan wadamada dariska la ah Soomaaliya, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen m/weynaha Kenya iyo qaar ka mid ah golihiisa xukuumadda, safiirada reer Yurub u jooga dalka Kenya, iyo wasiirrada gaashaandhigga ee dalalka Yugaadha iyo Buruundhi.
Wuxuuna sheegay dhammaan mas?uuliyiintaasi in ay ka wada hadleen xal u helidda dhibaatada dabo dheeraatay ee ka taagan Soomaaliya, isla markaana ay isla meeldhigeen wixii ay isla soo qaadeen.
M/weynuhu waxaa uu shirkiisa jaraa?id ku sheegay oo kale, Soomaaliya in ay ku soo duuleen xoogag shisheeye oo Al-qaacida ah, taasina ay u baahantahay in laga hor tago khatarteeda, wuxuuna xoogaga dawladdiisa ku kacsan uu ugu baaqay in ay wada hadal galaan isla markaana ka gudbaan qoriga caaraddiisa.